एक्स्कर्सको नयाँ डीजीम्याक्स थ्रीइ मसिन नेपालमा, के-के छन् विशेषताहरु ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > एक्स्कर्सको नयाँ डीजीम्याक्स थ्रीइ मसिन नेपालमा, के-के छन् विशेषताहरु ?
काठमाडौं । आइएमई अटो मोटिभ्सले एक्स्कर्सको हेभि इक्यूपमेन्ट सेगमेन्टमा नयाँ मसिन डीजीम्याक्स थ्रीइ ब्याक्होलोडरको विक्री खुल्ला गरेको छ ।
नयाँ मसिन अत्याधिक कार्य क्षमतासहित डिजाईन अरु भन्दा फरक रहेको छ । अपरेटरलाई काम गर्न सजिलो होस् भनेर ठुलो क्याबिन बनाइनुका साथै फ्युलइफिसेन्सीमा बिशेष ध्यानदिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
डीजीम्याक्स थ्रीइब्याक्होलोडरमा अगाडी रहेको बोनेट हुडलाई इटालीयन क्याबिन डिजाइनबाट साभार गरी बिशेष आकर्षक बनाइएको विक्रेता कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार रात्रीकालीन समयमा काम गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ मेसिनको लाइटिङ्ग सिस्टममा पावरफुल तथा ठुलो साइजका लीड लाइटहरु प्रयोग गरिएको छ।
अपरेटर कम्फर्टलाई ध्यानमा राखी आरामदायी सिट र राम्रो भेण्टिलेसन सिस्ट्म जडान गरिएको छ । अगाडी र पछाडी दुबैतिर क्याबिनको झयाल खोल्न सकिनेछ । जस्ले गर्दा अपरेटरलाई मेसिन चलाउँदा भिजिबिलिटी राम्रो हुनेछ । स्टेरिङ्ग चलाउँदा सजिलो होस् भनेर आफ्नो इच्छा अनुसार एडजस्ट पनिगर्न सकिने पावर स्टेरिङ्ग दिइएको छ ।
सहजै मसिन संचालन गर्नलाई स्विच साथै इन्सट्रुमेन्ट बोर्डहरुमा लाइटिङ्गको व्यवस्था गरिएको छ भने टुल्सहरु राख्न एक्स्ट्रा स्पेसको प्रावधान रहेको छ ।
यो मसिन बजारमा उपलब्ध मसिनहरु भन्दा अत्याधुनिक तथा युजर फ्रेण्डल्ली भएको कम्पनीका बिजनेस हेड कुलदीप घिमिरेले जानकारी दिनुभयाो ।
डीजीम्याक्स थ्रीइचौथो जेनेरेसन फिचर्समा आधारित छ । इक्युपमेन्ट मोनिटरिङ्ग सिस्टम ९भ्ःक्० जडान भएको हुँदाँ अपरेटरले मसिन संचालनको क्रममा मसिनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउने छन् । मसिनको अपरेशन खर्च कम लाग्ने भएकाले ब्याक्होलोडर सेगमेन्टमा एक्स्कर्सको राम्रो मार्केट शेयर बढ्ने कम्पनीको अनुमाग छ।
नेपालमा एक्स्कर्सको झण्डै ११०० युनिट भन्दापनि बढि मसिनहरु छन् । आइएमई अटोमोटिम्सले देशभरका १२ वटै शाखा अन्तर्गत २०१४ देखी एक्स्कर्स कन्ट्रक्सन इक्युपमेन्टका ब्याक्होलोडर, सोइल कम्पयाक्टर,हाइड्रा क्रेनहरु बिक्रि वितरण गर्दै आएको छ ।
क्रेन सेगमेन्टमा एक्स्कर्सनेपालकै नबर १ ब्राण्ड रहेको र ग्राहकको रोजाई अनुसार मसिनहरु अझै अपग्रेड तथा अपडेट गरेर बजारमा ल्याउँदै जाने घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
२०७७ फागुुण १८ गते ११:५४ मा प्रकाशित
यातायात व्यवस्था विभागले रोक्यो स्मार्ट लाइसेन्स छपाई
स्थायी नियुक्ति सम्वन्धी लोकसेवाले भर्खरै निकाल्यो यस्तो सूचना
मेगा बैंकले ल्यायो ‘मेगा भिसा क्रेडिट कार्ड’
अलैँची विरुवाको मूल्य यसरी तोकियो !
सेयर बजार ५.५२ अंकले वृद्धि : १ अर्ब ४० करोडको कारोबार, दुई कम्पनीमा लोभिए लगानीकर्ता
रैराङ हाइड्रोपावरको आइपीओ बाँडफाँड, कति जनाले पाए सेयर ?